आजको मौसम खतरापुर्ण छ की छैन ? | NepalDut
आजको मौसम खतरापुर्ण छ की छैन ?
सोमबारसम्ममा देशभर मनसुन सक्रिय हुनेछ । उक्त मनसुनको प्रभावले आगामी २र ३ दिन देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावनासमेत रहेको मौषम पुर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ।
आज पनि आशिंकदेखि सामान्य बद्ली भई केही ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ । सोमबार विषेशगरी पूर्वका केही ठाउँ, मध्य ९पश्चिम र सुदूर० पश्चिमका केही ठाउँमा ठुलो बर्षा हुने सम्भावना रहेको छ । तर आईतबार जसरी नै आज पनि भारी बर्षाको सम्भावना नरहेको बताईएको छ।
आज बेलुकी भने देशका अधिकांश स्थानमा बर्षाको सम्भावना रहेको छ । आज पनि भएको बर्षाको कारण देशका प्रमुख नदीहरुमा पानीको बहाब बढ्ने तर खतरापुर्ण भने हुने छैन। बिहीबारदेखि देशको पूर्वी क्षेत्र हुँदै प्रवेश गरेको मनसुन पश्चिम क्षेत्रतिर विस्तार हुँदै सोमबारसम्म देशभर फैलिएको जल तथा मौसम पूर्वनुमान महाशाखाका मौसमविद् शान्ति कँडेलले बताए ।
उनका अनुसार शनिबार मनसुन मध्य क्षेत्रका केही भेगमा बढी सक्रिय रह्यो । शनिबार रातिदेखि नै मध्यक्षेत्रमा सक्रिय रहेको मनसुन सुदूरपश्चिम पुगेको बताइएको छ ।